fady – Lalao Ofisialy Party Cheats&Hack – Torohevitra Android Cheats
fady – Lalao Ofisialy Party Cheats&Hack
Io no tsara indrindra amin'ny lalao teny rehetra! Manaova fety an-trano amin'ny findainao ary milalao Taboo amin'ny resaka video! Zarao amin'ny 2 ekipa ary mifandimby mamaritra ny teny – aza mampiasa ny teny na ny teny rehetra amin'ny karatra fotsiny! Tsy maintsy maminavina teny maro araka izay azo atao ny ekipanao alohan'ny hifaranan'ny fameram-potoana!
Toy ny Charades sy Heads Up!, Mahafinaritra ny olon-dehibe sy ny tanora ny fady. Ahoana no hamaritana ny APPLE raha ny teny hoe MENA, VOANKAZO, henan'omby, CIDER sy CORE dia fady avokoa? Raha diso ny fampiasana teny fady, hitabataba ny ekipa hafa ary ho very isa ianao! Manaova fialamboly mitabataba miaraka amin'ny namanao sy ny fianakavianao. Miasa ny fampiharana raha miaraka amin'ny toerana iray ianao, na misaraka amin'ny alalan'ny chat video! Ny buzzer, fameram-potoana, karatra sy video chat dia naorina ao – ny findainao ihany no ilainao. Mieritrereta haingana, miresaka haingana sy manapotika ny fifaninanana!
– CHAT VIDEO IN-GAME – Tsy mila fampiharana na efijery fanampiny ianao! Lalao mifanatri-tava amin'ny 2-6 NAMANA, na aiza na aiza misy anao!
– MIlalao ao amin'ny efitrano iray ihany – Alefaso amin'ny finday iray ny maody antoko eo an-toerana, miaraka amin'ny mpilalao tsy misy fetra!
– LALAO TSY MISY ADIKA – Mifalia amin'ny doka aotra mba hanelingelina anao!
– MODE MPILALA ROA – Fanamby namana iray miaraka amin'ny fomba tokana mpilalao 2!
– 500 KARATRA – Ahitana karatra avy amin'ny lalao tany am-boalohany!
– PACKS KARARA EXTRA – Vidio ny tokotanin-tsambo mahafinaritra mba hitazonana ny lalaonao ho vaovao. Anisan'izany ny:
fahafinaretana & Lalao
…ary roa mifono mistery mampientam-po!
Manomboha lalao ary asao ny namanao. Na mamorona vondrona chat anaty app miaraka amin'ny namanao ary manomboka lalao amin'ny chat anao!
Ny fady dia lalao ho an'ny 2-6 mpilalao an-tserasera, miaraka amin'ny chat video. Midika izany fa afaka milalao mifanatrika ianao na dia tsy afaka miaraka aza. Azonao atao koa ny milalao miaraka amin'ny namana maro araka izay tianao, amin'ny olona, miaraka amin'ny Mode Party Local.
Zarao ho ekipa roa
Zarao ho ekipa roa ary omeo anarana ny ekipanao.
Ny mpanome Clue dia voatendry avy amin'ny Ekipa A
Mpanome famantarana avy amin'ny ekipa A no hofidian'ny fampiharana. Amin'ny fihodinana manaraka, Mpanome Clue avy amin'ny ekipa B no handray ny anjarany.
Ny mpanome Clue dia misintona karatra
Ny mpanome Clue avy amin'ny Ekipa A ihany, ary ny ekipa B rehetra, afaka mahita ny karatra. Ny mpanome Clue dia tsy maintsy manandrana milaza amin'ny ekipany hoe inona ilay teny, tsy milaza na iray aza amin'ireo teny fady.
Ekipa B mijoro eo anilan'ny Buzzer
Hitabataba ny ekipa B raha milaza teny fady ny mpanome Clue!
Jereo ny fameram-potoana
Tsy maintsy maminavina teny maro araka izay azo atao ny ekipanao alohan'ny hifaranan'ny fotoana. Handresy ianao 1 teboka isaky ny vinavina marina.
Afaka mitsambikina ianao 2 karatra isaky ny mandeha. Aorian'izay, ho azon'ny ekipa hafa 1 teboka isaky ny mandingana karatra ianao.
Famaranana ny lalao
Mifarana ny lalao rehefa nifandimby ho Mpanome Clue ny mpilalao tsirairay. Na rehefa samy manana isa mitovy amin'ny maha-mpanome Clue ny ekipa tsirairay.
MODE ANTOKO AN-TOERANA
Raha ao amin'ny toerana iray ihany ianareo, afaka milalao miaraka amin'ny namana maro araka izay tianao ianao, mampiasa telefaona tokana!
– Zarao amin'ny 2 ekipa
– Mifandimby ho Mpanome Clue
– Raha ianao no mpanome Clue, ataovy azo antoka fa tsy hitan'ny ekipanao ny efijery
– Raha ao amin'ny ekipa mpanohitra ianao, mipetraha na mijoro ao ambadiky ny mpanome Clue ary mikiakiaka raha mampiasa teny fady izy ireo
– Ny mpanome Clue dia tsy maintsy manindry ny buzzer avy eo
Azonao atao ihany koa ny milalao miaraka amin'ny namana iray amin'ny fomba roa-Player!
– Miangavy anao raha mampiasa teny fady ianao
Aoka ianao ho tompon'ny teny ary reseo irery ny mpifanandrina aminao.
Miaraha ary milalao miaraka amin'ny namanao, na aiza na aiza misy anao!
Sokajy: Cheats sy Hack na toro-hevitra Tags: CheatsHack, Tapaka ny, Official, Antoko, fady
← Cave Driller – mangalatra&Hack Farmington: MyFarm taloha tsara – mangalatra&Hack →